သင့်ချစ်သူ ကောင်လေးက အရမ်းကလေးဆန်တယ် ဆိုတာ ဒီအချက်တွေကတဆင့် သိနိုင်ပါတယ် – Tameelay
သင့်ချစ်သူ ကောင်လေးက အရမ်းကလေးဆန်တယ် ဆိုတာ ဒီအချက်တွေကတဆင့် သိနိုင်ပါတယ်
သင့်ချစ်သူကောင်လေးက လူပုံအလယ်မှာ အားကိုးရတဲ့ ခန့်ညားပြည့်စုံတဲ့ ယောက်ျားလေး ဖြစ်နေပေမဲ့ တခါတလေ ကလေးဆိုးကြီးနဲ့ တူသွားတတ်ပါတယ်။
ကလေးဆန်တဲ့ ကောင်လေးအများစု ပြုလုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အစားအသောက် ချေးများတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို စားစရာ အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို မြည်းမကြည့်ရသေးဘဲ မကြိုက်ဘူးလို့ အမြဲ ပြောတတ်လေ့ရှိပါတယ်။
စားကြည့်လို့ ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်လည်း အလွန်အကျွံစားတတ်တာ သူတို့ အကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သူတို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းကို မကိုင်မိတာမျိုး ၊ ၁၅ မိနစ်လောက်နေမှ သူတို့ပို့ထားတဲ့ စာကိုပြန်ပို့မိတာမျိုးဆိုရင် ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ဒေါသတွေဖြစ်နေတတ်တာတွေ။
၃။ အရေးကြီးတဲ့ ပွဲတစ်ခုခုသွားခါနီးပြီဆိုရင် ဘာဝတ်ရမလဲ မရွေးတတ်တာကြောင့် ချစ်သူကပဲ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးရတတ်တာ။
၄။ မနက်အိပ်ယာထတဲ့အချိန်မှာ လည်ချောင်းနာတာ နှာစေးတာလောက်ဖြစ်ရင် သူတို့ကိုသူတို့ ဖျားပြီလို့ ထင်တတ်ပြီး တကယ်ဖျားပြီဆိုရင်တော့ အချိန်မရွေး သေသွားနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတတ်တာ။
ဒါပေမဲ့ ဆေးခန်းသွားဖို့ကိုတော့ အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆန်ပြီးမှ သွားတတ်တဲ့ ကလေးဆိုးကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ တစ်ခုခုလိုအပ်လို့ ဈေးအတူသွားဝယ်ကြတဲ့အခါ အချိ်န်ကြာလာရင် စိတ်ကောက်သလို မျက်နှာကြီး ရှုံမဲ့လာတတ်တာ။
၆။ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ မူလတန်းကလေးငယ် တစ်ယောက်လို ချစ်သူဆီကနေ ချီးကျူးစကားကို ကြားချင်တတ်ကြတဲ့သူမျိုးတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ကစားစရာ အသစ်လိုမျိုး ဖုန်းအသစ် ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုခု ရသွားတဲ့အခါမှာ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကို မေ့ပြီး သတိပေးမှ ရပ်တတ်တာ။
၈။ ဗိုက်ဆာပြီဆိုရင် ချက်ချင်းဆာတတ်ပြီး မစားရရင် အလိုလို ဒေါသကြီးလာတတ်တာ။
၉။ ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျမသိမ်းတတ်သလို ဘယ်နေရာမှာ ဘာပစ္စည်းထားသလဲဆိုတာကို ချစ်သူကို မေးပြီးမှ ရှာတတ်တာ။
၁၀။ ကလေးတစ်ယောက် ကစားစရာတွေ ရှုပ်ပွထားသလိုမျိုး သူတို့ရဲ့ အဝတ်တွေ ၊စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေကို အမြဲနောက်က လိုက်ပြီး သိမ်းဆည်းပေးနေရတာတွေ။
ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးမျိုးက အနည်းငယ် ကလေးဆန်တယ် ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
သငျ့ခဈြသူကောငျလေးက လူပုံအလယျမှာ အားကိုးရတဲ့ ခနျ့ညားပွညျ့စုံတဲ့ ယောကျြားလေး ဖွဈနပေမေဲ့ တခါတလေ ကလေးဆိုးကွီးနဲ့ တူသှားတတျပါတယျ။
ကလေးဆနျတဲ့ ကောငျလေးအမြားစု ပွုလုပျတတျတဲ့ အပွုအမူတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
၁။ အစားအသောကျ ခြေးမြားတဲ့ ကလေးတဈယောကျလို စားစရာ အသဈအဆနျးတဈခုကို မွညျးမကွညျ့ရသေးဘဲ မကွိုကျဘူးလို့ အမွဲ ပွောတတျလရှေိ့ပါတယျ။
စားကွညျ့လို့ ကွိုကျသှားပွီဆိုရငျလညျး အလှနျအကြှံစားတတျတာ သူတို့ အကငျြ့ပဲဖွဈပါတယျ။
၂။ သူတို့ချေါတဲ့ဖုနျးကို မကိုငျမိတာမြိုး ၊ ၁၅ မိနဈလောကျနမှေ သူတို့ပို့ထားတဲ့ စာကိုပွနျပို့မိတာမြိုးဆိုရငျ ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ဒေါသတှဖွေဈနတေတျတာတှေ။
၃။ အရေးကွီးတဲ့ ပှဲတဈခုခုသှားခါနီးပွီဆိုရငျ ဘာဝတျရမလဲ မရှေးတတျတာကွောငျ့ ခဈြသူကပဲ ရှေးခယျြဆုံးဖွတျပေးရတတျတာ။
၄။ မနကျအိပျယာထတဲ့အခြိနျမှာ လညျခြောငျးနာတာ နှာစေးတာလောကျဖွဈရငျ သူတို့ကိုသူတို့ ဖြားပွီလို့ ထငျတတျပွီး တကယျဖြားပွီဆိုရငျတော့ အခြိနျမရှေး သသှေားနိုငျတဲ့သူတဈယောကျလို ဖွဈနတေတျတာ။
ဒါပမေဲ့ ဆေးခနျးသှားဖို့ကိုတော့ အကွိမျကွိမျငွငျးဆနျပွီးမှ သှားတတျတဲ့ ကလေးဆိုးကွီးတှေ ဖွဈပါတယျ။
၅။ တဈခုခုလိုအပျလို့ စြေးအတူသှားဝယျကွတဲ့အခါ အချြိနျကွာလာရငျ စိတျကောကျသလို မကျြနှာကွီး ရှုံမဲ့လာတတျတာ။
၆။ သူတို့လုပျထားတဲ့ အလုပျတဈခုအောငျမွငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ မူလတနျးကလေးငယျ တဈယောကျလို ခဈြသူဆီကနေ ခြီးကြူးစကားကို ကွားခငျြတတျကွတဲ့သူမြိုးတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
၇။ ကစားစရာ အသဈလိုမြိုး ဖုနျးအသဈ ဂိမျးအသဈတဈခုခု ရသှားတဲ့အခါမှာ ကနျြတဲ့အရာအားလုံးကို မပွေီ့း သတိပေးမှ ရပျတတျတာ။
၈။ ဗိုကျဆာပွီဆိုရငျ ခကျြခငျြးဆာတတျပွီး မစားရရငျ အလိုလို ဒေါသကွီးလာတတျတာ။
၉။ ပစ်စညျးတှကေို စနဈတကမြသိမျးတတျသလို ဘယျနရောမှာ ဘာပစ်စညျးထားသလဲဆိုတာကို ခဈြသူကို မေးပွီးမှ ရှာတတျတာ။
၁၀။ ကလေးတဈယောကျ ကစားစရာတှေ ရှုပျပှထားသလိုမြိုး သူတို့ရဲ့ အဝတျတှေ ၊စာရှကျစာတမျးတှေ၊ အသုံးအဆောငျတှကေို အမွဲနောကျက လိုကျပွီး သိမျးဆညျးပေးနရေတာတှေ။
ဒီအခကျြတှကေို ပွုလုပျတတျတဲ့ ကောငျလေးမြိုးက အနညျးငယျ ကလေးဆနျတယျ ဆိုတာတော့ သခြောပါတယျ။
ကျမလား? ကွမ်းမစားတဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… ဆေးလိပ် မသောက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… နားကပ် မတပ် နားမဖောက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… အမြဲတမ်း ဘီယာမသောက် အရက်မသောက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… တက်တူး မထိုးတက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… ရှိတာ မရှိတာ အပထားလို့ …
” အမိုက်ပုံးထဲကအမှန်တရား” သူဋ္ဌေးသား ဘောင်းဘီအပြဲဝတ်ထားရင်စတိုင်(လ်)ပေါ့။ ဆင်းရဲသား အပြဲဝတ်တော့ စုတ်ပြတ်နေတာပေါ့။ မင်းသား မျက်လုံးနီနေတော့ အိပ်ရေးပျက်ရှာတယ်ပေါ့။ လူရွှင်တော် မျက်လုံးနီနေတော့ အရက်သောက်လို့ ပေါ့။ စာတော်တဲ့ကျောင်းသား ပုစ္ဆာအမှားကြီးတွက်ထားတော့ လျှမ်းသွားတယ်ပေါ့။ စာညံ့တဲ့ကလေး မှားတွက်တော့ ညံ့လွန်းတယ်ပေါ့။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ လက်စွပ်ကရွှေအစစ်ပေါ့။ ပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ လက်စွပ်ကရွှေအတုပေါ့။ ခေါင်းပေါင်းဝတ်ထားရင် …
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ်……. မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ်…… သူမကို ပထမဆုံးပွေ့ဖက်သူက ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး….. သူမကို ပထမဆုံး နမ်းရှုံ့ခဲ့သူကလဲ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး….. သူမကို ပထမဆုံး ချစ်ခင်ခဲ့တာလဲ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး….. ဒါပေမဲ့ သူမကို တစ်ဘဝလုံး …